Taorian’ny Nandàvany Ny Fifanarahana Fandriampahalemana, Mikatsaka Làlam-baovao i Kôlômbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2016 7:34 GMT
Diabe ho an'ny fandriampahalemana tao Bogotá. Sary navoakan'i Elmer Montaña tao amin'ny kaontiny Facebook ary naverina navoaka rehefa nomeny alàlana.
[Lahatsoratra niaingàna nivoaka ny 22 Oktobra 2016 tamin'ny teny Espaniôla] Rehefa fantatra hoe nirona nampandresy ny ‘Tsia’ ireo vokatry ny fitsapankevitra tamin'ny 2 Oktobra izay tokony ho nanamafisana ny fifanarahana fandriampahalemana eo amin'ny fanjakàna sy ireo Tafika Revolisionera Mitam-piadiana ao Kôlômbia (FARC), latsaka ao anatin'ny fisalasalàna tsy nampoizina ny firenena satria tsy nisy nivonona ho amin'io famahàna olana io, na ny andaniny , na ny ankilany, dia ilay antsoin'ny maro hoe Brexit Kôlômbiana.
Ao anatin'ny gazety “El Colombiano”, nampifandraisin'ilay toniandahatsoratra, Luis Fernando Álvarez, ireo tranga roa ireo :
Ny governemanta britanika no nampiantso azy, tamin'ny fanantenana fa hahazo fanohanana be amin'ny vahoaka izy io mba hahatonga ho ekem-bahoaka ny fitazonana azy eo anivon'ny firaisambe eorôpeana ; kanefa, rehefa nivoaka ny valiny, ireo nifidy hivoaka tamin'ny Fiombonambe (ny Brexit) no tena gaga. Samy tsy nisy nanana drafitra fanolo na ny andaniny, na ny ankilany, mba hiatrehana ny vokatra tahaka izany, izay ny fiantraikany ara-politika voalohany indrindra dia ny fametrahana fialàna nataon'ny Praiminisitra.
Tao Kôlômbia, toa nitovitovy amin'izay ny zavanisy, fa fotsiny, sady tsy fahamalinana no tsy iriana ny hitakiana ny fametrahana fialàna ataon'ny Filoha.
Nahagaga ny vokatra, satria ny ‘Eny’ no nivoaka ho mpandresy nandritr'ireo fitsapankevitra ; tsy nampoizina ihany koa ny haavon'ny tsy fandraisana anjara, izay ny avo indrindra teo amin'ny tantaran'i Kôlômbia : 37,43 % monja tmin'ireo mpifidy voasoratra no nandeha nifidy. Ankoatra izay, ny elanelana tery dia tery, vato 53.894, dia mampiseho ny fisian'ny tendro roa izay manamarika ara-tanttara ny fiarahamonina kôlômbiana ary nihamafy hatramin'ny nanombohan'ireo dingana fikatsahana fandriampahalemana niarahana tamin'ny FARC.
Niaraka tamin'ilay ‘Tsia’ narahan'ny tsy fahombiazan'ilay tondrozotra ho an'ny ankolafy roa, betsaka ny fanontaniana teraka teny anivon'ny vahoaka : Azo heverina ve ny hisian'ny fandriampahalemana ? Tafahoatra loatra ve ny fitokiana? Ny onjan'ny fanodinkodinana ny vaovao ve no nandresy? Inona no mba lanjan'ireo vondrona kristiana sy ireo eglizy mpitory filazantsara? Manana anjara toerana ve ny fotokevitry ny miralenta? Ho voapôrofo hoazy ve ny finiavan'ireo mpiady anaty akata hikatsaka fandriampahalemana ? Voasazy noho ireo tsy fahombiazany tany amin'ny sehatra hafa ve i Santos ? Ilaina ve ny mitondra ny Kôlômbiana hiatrika fitsapankevi-bahoaka? Nisy fiantraikany tamin'ny fifidianana tany amin'ny faritra kôlômbiana karaiba ve ny fandalovan'ny rivomahery Mathew ? Ny fankahalàna ny FARC ve no nandresy ? Sa ny tahotra ny “Castro-Chavisme” tsy mitombina akory? Tsy maintsy mila lalàmpanorenana vaovao ve ?… Dia inona izao no hitranga?
Miverina tonga saina ilay firenena
Mitàna ny lanjany ihany, na eo aza ny vokatr'ilay fitsapankevitra, ilay fifanarahana fandriampahalemana natao niaraka tamin'ny FARC mba hampitsaharana ilay fifandonan sy hametrahana fandriampahalemana lovain-jafy, voasonia tamin'ny 26 Septambra tao Carthagène. Raha nidika andraikitra politika ilay izy ho an'ny filoha kôlômbiana, na tsy voatery aza, dia nanapaka samirery Ing. Santos ny hampiantso azy io, natoky ny demaokrasia.
Na teo aza ilay vokatra tsy nampoizina, samy nilaza daholo ireo rehetra mpisehatra fa mankasitraka ny hitohizan'ilay dingana fikatsahana fandriampahalemana: ny governemanta, ireo mpanohana ny ‘Tsia’ sy ry zareo FARC. Izay nanamora ny fihaonan'ny filoha Santos sy ireo mpanohitra, izay herinandro taorian'ilay fitsapankevitra, nanomboka niasa taminà andianà tolokevitra ho an'ny fifanarahana iray vaovao hikatsahana fandriampahalemana any aoriana. Ireo izay nifidy ny ‘Tsia’ dia nanipika fa tsy nandà ny hisian'ny fandriampahalemana ry zareo, fa mikatsaha fifanarahana iray ‘tsara kokoa’.
Fa raha ny momba ireo mpiady anaty akata, mpihoko avy amin'ny elatra havia indray, ny Ejercito de Liberación Nacional (ELN), nambaran'ny governemanta ny fisian'ireo fifampiresahana tamin'ny vahoaka ny 27 Oktobra tao Ekoatora. Ny ELN izay manana milisy manakaiky n y 1.300 isa, dia teraka tamin'ny 1964 tao San Vicente de Chucurí, ao anatin'ny departemantan'i Santander (Avaratr'i Kôlômbia), ireo avarapianarana marksista mpandàla ny revolisiôna Kiobàna, ary manafangaro ireo hevitra revôlisiônera amin'ireo hevitra ara-pinoana momba ny fahafahana.
Raha ny momba ny fampitsaharana ny fifampitifirana, nambaran'ny filoha ny fanalavàna azy io ho hatramin'ny 31 Desambra amin'ity taona ity, ary nohamafisiny fa azo havaozina ilay izy.
Fanampin'izany, nisy taharo iray vaovao nampamiratra ny fanantenana hisian'ny fifanarahana vaovao : ny loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana natolotra an'i Santos, izay teo am-pahenoana izany dia nanamafy fa hanohy hiasa mba hanatratrarana azy io. Nanambara mihitsy aza izy tao amin'ny Twitter fa ho atolony ho an'ireo niharam-boina tamin'ny ady ny vola azony amin'ilay loka.
Ho an'ny Kôlômbiana ny loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, indrindra fa ireo nijaly noho ny ady. Nanapaka hevitra ny izahay mianakavy fa hatolotra ho an'ireo niharam-boina ny vola
Ny bitsik'i Héctor Abad Facio Lince, mpanoratra, ho setrin'ilay nalefan'ny filoha, dia namintina ny fihetsehampon'ny ampahany amin'ireo vahoaka momba ny ilàna ilay loka ao anatin'ilay dingana hikatsahana fandriampahalemana :
Any anaty lalao échecs dia misy ihany koa ireo fihetsika mamiratra izay manova ny toedraharaha eo ambonin'ny latabatra filalaovana, rehefa ilay toa tsy hisy fanantenana iny intsony ny lalao. Misaotra ry Norvezy !
Kanefa, nitsena ny fotoana nanolorana ilay valisoa ihany koa ny fisalasalàna sy fanoherana :
Tsy azoko ??? nahazo loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana i Juan Manuel Santos izay ny ankamaroan'ny vahoaka kôlômbiana no nandà azy tamin'ny fomba demaokratika tamin'ny latsabato
Arahaba ry firenena tsy misy fandriampahalemana saingy manana Nobel, miaraka amin'ireo fifanarahana tsy misy fanekena, ary miaraka amin'ny tolokevitra iray tsy misy tohankevitra sy/na fahadiovam-po.
Ho azy ‘ireo kosa, ny mpanohitra tarihan'ilay filoha fahiny ary loholona ankehitriny, Álvaro Uribe Vélez, niaraka tamin'ireo mpkambana hafa ao amin'ny antoko politika misy azy, ny Centro Democrático, dia iharan'ny fanarahana maso hentitra noho ny fitarainana iray milaza fisianà hosoka tamin'ny fifidianana, amin'ny fanindriana fa nanao fampielezankevitra izy tsy hahatanteraka ilay fifanarahana fandriampahalemana, niainga tamin'ireo fanambaràna nataon'ny taleny, Juan Carlos Vélez Uribe, tao anatin'ny tafa iray niarahany tamin'ny gazety “La República”.
Ireo hetsika sôsialy taorian'ny “Tsia”
Ireo vahoaka niaina akaiky ny ady, tahàka ireo ao amin'ny departemantan'i Cauca, Chocó, Putumayo sy Vaupes, ankoatra ny hafa, dia nifidy mavesatra ny “Eny” tamin'ilay fitsapakevitra, nanome lesona momba ny fifamelàna sy fihavanana ho an'ireo Kôlômbiana ambiny rehetra. Marobe ireo nanararaotra ilay fotoana mba hanehoana ny firaisankinan-dry zareo sy ny tsy hafaliany taorian'ny nanambaràna ny vokatra :
Iza no handeha ho any amin'ireo faritra nandany ny “ENY” mba hanazava amin'izy ireo ny lalàna hizorana taorian'ny fandresen'ny “TSIA” tamin'ilay fitsapankevitra nasiônaly?
Io hatezerana io indrindra no isan'ny iray tamin'ireo antony nanosika ireo tanora, ireo mpianatra, ireo vahoaka indizena sy ireo sehatra samihafa ao anatin'ny fiarahamonina sivily, hidina teny an'arabe, nilahatra sy nikiaka teny faneva isan-karazany itarafana ny finiavan'ireo olompirenena kôlômbiana mba hitsaharan'ny ady. Lasa marimaritra iraisan'ireo faritra samihafa ireny diabe ireny.
“Aza mihemotra, fandriampahalemana no ilaintsika!” no hiakan'ireo Kôlômbiana teo ambanin'ny tenifototra #PazALaCalle (Fandriampahalemana midina an-dalambe), nanao hetsika tsy nomanina tamin'ny 3 Oktobra, ny ampitson'ilay fitsapankevitra, fihetsiketsehana tany amin'ireo tanàn-dehibe maro tao amin'ny firenena mba hiarovana ny fandriampahalemana, na araka ny filazan-dry zareo azy, ny firenena mendrika ho azy ireo. Ity ny fijoroana ho vavolombelona anaty lahatsary nataon'ny mpampiasa Youtube, jacastillo9101 :
Ity lahatsary iray hafa ity, an'i Ricardo Galán, dia mampiseho diabe iray tao Bogotá ny 12 Oktobra. Mihiaka ny teny faneva fototra ho azy ireo ny vahoaka, manao hoe : “Ilay fifanarahana, izao dieny izao !”
Na eo aza ireo fankahalàna sy fifanompàna fahiny voarakitry ny tambajotra sosialy, ary ny fihanaky ny taimbava ifanaovana, na tsy mafy loatra intsony aza, eo amin'ireo “Mpomba ny Tsia” sy Mpomba ny Eny”, ankehitriny tonga avy amin'ny lafy rehetra ireo olona izay maniry fandriampahalemana, eo ambanin'ny tenifototra #BrigadaDigital sy #PazALaRed (Fandriampahalemana ety anaty tranonkala). Ity ny iray amin'ireo tolokevitr'i Mauricio Jaramillo :
Izaho no nitsoraka voalohany tao anatin'ny #PaixSurLeWeb. Izay tsy midika hoe tsy hanao fanakianana na tsy hiaro hevitra. Tsy hoe tsy fisiana fahasamihafàna na adihevitra akory no atao hoe fandriampahalemana. Hitambatra?
Nafàna ireo herinandro lasa, saingy nahitàna ireo tanora nandray an-tànana ny hoaviny sy ny an'ireo andian-taranaka vaovao. Manohy midina an'arabe ry zareo ary miantso ny hanatevenana laharana ireo fihetsiketsehana, izay ankehitriny lasa eo ambany tenifototra vaovao : #EnLasCallesLaPazRenace (Fahaterahana vaovaon'ny fandriampahalemana eny an'arabe) :
Rahampitso Talata 14 Oktobra amin'ny 7 ora hariva. Asaina am-panajàna ny tanàna manontolo mba hanatrika ny Fivoriamben'ny #Fandriampahalemana eny an'arabe ! Ampitampitao!
Takian'ireo mpanao fihetsiketsehana ny hampitambaran'ny governemanta sy ny filoha fahiny Uribe ny heriny mba hahatongavana aminà fifanarahana iray ahafahana mamàrana ilay dingana iray efa nokotrehina hatramin'ny 2012.
Dia inona no ho tohiny?
Manomboka hita soritra ny toedraharaha, miainga avy amin'ireo adihevitra ifanaovan'ny governemanta miaraka amin'ireo ankolafy rehetra mpomba sy mpanohitra io fifanarahana fandriampahalemana. Nandeha nifampiresaka tamin'ireo mpanohitra sy mpomba ilay fifanarahana fandriampahalemana ny filoha sy ny ekipany, ary ankehitriny misy tolokevitra arosony, izay atsy aoriana kely dia hoentina hifampiraharahàna amin'ny FARC.
Io fiombonana politika sy sôsialy io, izay izoran'ny ankamaroan'ireo Kôlômbiana, no mety ho vahaolana hahitàna izay fifanarahana farany hisian'ny fandriampahalemana notadiavina hatry ny ela. Fa hisy ve anefa io fiombonana io? Fa ny zavamisy aloha dia leo ady ary maniry fandriampahalemana ny Kôlômbiana.